चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले २० करोड घु’स मागेकै हुन त ? – Khabarhouse
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले २० करोड घु’स मागेकै हुन त ?
Khabar house | २४ पुष २०७६, बिहीबार १६:०१ | Comments
काठमाडौं, २४ पुष । झापास्थित ‘बी एण्ड सी मेडिकल कलेज’का सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरीमाथि घु’स मागेको आ’रोप लगाएका छन् । सञ्चालक प्रसाईले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले ‘बी एण्ड सी कलेज’को सम्बन्धनका लागि मंसिर १५ गते द्वारिका होटलमा २० करोड घु’स मागेको आ’रोप लगाएका हुन् ।
तर, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले घुस मागेको प्रमाण भने सञ्चालक प्रसाईले पेश गर्न सकेका छैनन। अर्को तर्फ उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले आफूमाथि विनाप्रमाण झुटो आ’रोप लगाइएको दा’बी गर्दै आएका छन। उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले सञ्चालक प्रसाई वि’रुद्ध कानूनी का’रवाहीमा जाने बताइरहेका छन् । तर, आज (विहीबार) सम्म छलफलमै रहेको भन्दै कानूनी प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालक र आयोगका उपाध्यक्ष बीच २० करोड घु’सको विषय चर्चामा आँउदा पनि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाले जा’हेरी नपर्दा सम्म केही गर्न नमिल्ने बताएका छन्। सञ्चालक प्रसाईले द्वारिका होटलमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरी लाई भेट्दा घु’स मागेको आ’रोप लगाएका छन् । तर, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले भने आफू उक्त होटलमै नगएको र प्रसाईलाई एक पटक मात्रै आफ्नो कार्यालयमा देखेको बताउदै आएका छन् ।
उनीहरु दुवै जनाले नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकमका एक प्राविधिकले उनीहरु दुवै जनाको फोन नम्बर माथि अनु’सन्धान गर्न मिल्ने बताए । तर, नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले भने का’नूनी विषय भएकाले मि’डियामा नभई अदालत अथवा सरोकारवाला निकायमा मात्रै जानकारी गराउने बताइन् । न्युज २४ नेपालबाट साभार